Sida loo arko astaan ​​gaar ah barta Instagram | Androidsis
Hadaad rabto a fiiri astaan ​​gaar ah oo 'Instagram' ah, kuwa isticmaaluhu si ula kac ah u xanibay si aan qofna, ogolaansho la'aan, u heli karin dhammaan waxyaabaha uu ku baahiyo shabakadda kale ee bulshada ee Facebook, qodobkan waxaan ku tusinaynaa habab kala duwan oo aad isugu daydo inaad ku gaarto.
Markaan idhaahdo isku day inaad hesho, waxaan ula jeedaa ma jirto hal hab oo keliya taas oo u oggolaanaysa marin u helka koontooyinka uu adeegsaduhu si ula kac ah u xanibay, maaddaama sidan oo kale, ay maamusho dhammaan dadkaas doonaya inay arkaan waxyaabaha ay daabacayso oo si habboon u xaddidi kara.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ka ogaato hawlgalka astaamaha gaarka loo leeyahay ee 'Instagram' waa sida ay u shaqeeyaan iyo tan tan, waxaan ku tusi doonnaa tallaabooyinka la raacayo samee astaan ​​astaan ​​gaar ah oo 'Instagram' ah.
1 Samee astaan ​​astaan ​​u gaar ah 'Instagram'
2 Hababka loo arko astaanta gaarka ah ee 'Instagram'
2.1 Codso helitaanka koontada
2.2 Fariin u dir mulkiilaha koontada
2.3 Hubi shabakadaha kale ee bulshada
2.4 Kala hadal saaxiib qofka aad raaceyso
2.5 Laga soo bilaabo koontada qof kale
2.6 Ha aaminin barnaamijyada ama adeegyada mucjisada ah
2.6.3 Sawir qaade qaas ah
Samee astaan ​​astaan ​​u gaar ah 'Instagram'
Waxa ugu horreeya ee maskaxda lagu hayo marka loo beddelayo koonto dadweyne koontada gaarka loo leeyahay waa inaad kaliya sameyn karto haddii ay tahay koonto shaqsiyeed, maaddaama xisaabaadka abuuraha ay ku jiraan, sida iska cad, ma noqon karo mid gaar loo leeyahay maxaa yeelay macno la’aan bay noqonaysaa.
Mar alla markii aan ka furnay barnaamijka Instagram qalabkeenna Android, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa helitaanka fursadaha qaabeynta ee dalabka.
Xulashada qaabeynta gudaheeda, waxaan tagnaa qeybta Privacy.
Dusha sare ee liiskaan, waxaan ka helnaa ikhtiyaarka Koonto gaar loo leeyahay wakiil padlock. Si akoonkeena guud loogu rogo mid gaar ah, waa inaan shidnaa furaha.
Laga soo bilaabo xilligan koontadayada:
Kaliya kuwa raacsan waxay awoodi doonaan inay arkaan waxyaabaha aan daabacno.
Waxaan awoodi doonnaa inaan sii wadno ku qornaanta sawirada, helno fariimo qof walbana wuxuu awoodi doonaa inuu nagu xuso qoraaladooda.
Isla markiiba ka dib, Instagram wuxuu nagu casuumi doonaa inaan dib u eegno kuwa raacsan, haddii ay dhacdo inaan doonayno inaan nadiifino oo aan baabi'inno dhammaan dadkaas aynaan rabin inaynu u sheegno waxqabadyadayada, sheekooyinka iyo kuwa kale.
Laga soo bilaabo xilligaas, ku xiga astaanteenna quful ayaa ka soo muuqan doona raadinta kaas oo lagu fuliyo barta Instagram halka aan ka muuqanno, laakiin aan ahayn astaanteenna, waa ikhtiyaar ay tahay in laga beddelo mustaqbalka barxadda si markaa isticmaalehu u ogaado mar walba haddii koontiisu ay tahay mid gaar ah ama mid guud, gaar ahaan dhammaan kuwa isticmaala cidda uu jecel yahay inuu si joogto ah u badalo gobolkiisa.
Hababka loo arko astaanta gaarka ah ee 'Instagram'
Codso helitaanka koontada
Tallaabada ugu horreysa ee ay tahay inaan sameyno si aan ugu awoodno helitaanka koonto gaar loo leeyahay 'Instagram' waa inaan raacno adeegsadaha. Dhibaatada aan helnay waxay tahay inaanan dhab ahaan raaceynin, haddii aad gujiso badhankaas, isticmaalaha waxaad heli doontaa farriin kuu sheegaysa in isticmaalaha uu doonayo inuu ku raaco.
Wuxuu heli doonaa fariin meeshuu karo xaqiiji ama tirtir dalabka In kasta oo ay tahay habka ugu horreeya ee aan ku hayno gacanteenna, haddana laguma talinayo, maadaama tan ugu nabdoon ay tahay inay si dhakhso leh u diidaan codsiga haddii aysan na aqoon.
Fariin u dir mulkiilaha koontada
Qaabka labaad ee aan isku dayeyno inaan ku galno astaanta gaarka ah ee 'Instagram' waa inaan codsanno marin u hel kuu soo diraya fariin. Haddii aad rabto in codsiga looga baaraandego sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, sida ugu fiican ee aan sameyn karno ayaa ku caddeyn karnaa farriinta cidda aan nahay, xiriirka aan la leenahay isaga iyo sababta aan u dooneyno inaan ku galno muuqaalkiisa.
Sidan oo kale, haddii isticmaaluhu kaliya raadinayo asturnaan oo uu adiga ku garanayo, wax dhibaato ah kuma lahaan doono adiga ogolaansho biilkaaga. Haddii aan kaliya dirno codsi aan raacno, waxaan haysanaa fursad yar oo aan ku helno, sidaa darteed ikhtiyaarkan marwalba waa lagugula talinayaa kan ugu horreeya.
Hubi shabakadaha kale ee bulshada
Dadka qaarkiis waxay isku xiraan xisaabaadka Facebook, Twitter iyo barnaamijyada kale sidaa darteed, markay ku daabacayaan waxyaabaha cusub barta Instagram, si toos ah waxaa sidoo kale lagu daabacay dhufto ee kale. Hadday sidaas tahay, waa inaad ka raadsataa shabakadaha kale ee bulshada, gaar ahaan Facebook xiriirkeeda Instagram.
Haddii aan helno dhibaato isku mid ah, in astaanta Facebook-ga uusan qof walba heli karin, waa inaan helnaa raadso habab kale oo kale, haddii aan horey u tijaabinay labada hore ee aan ku soo sheegay maqaalkan.
Kala hadal saaxiib qofka aad raaceyso
Haddii aan jawaab ka helin codsiyadayada, waan kari karnaa la xiriir saaxiib kuu ah marin koontadaada oo waxaan kugu boorinayaa inaad lahadasho isticmaale koontada si aad noogu ogolaato inaan ku raacno.
Ilaa ay tahay koonto leh tiro badan oo raacayaal ah, waxay u badan tahay in haddii aynaan helin oggolaansho aan ku raacno koontada ka dib markii aannu marar badan codsanay, lama waxay u badan tahay inaan ku guuleysan doono isla guusha.
Laga soo bilaabo koontada qof kale
Haddii aysan suurtagal ahayn, waxaan weydiin karnaa saaxiibkeen helitaanka akoonkiisa, si aad nooga tagto qalabkaaga si aan u aragno koontada aan dooneyno inaan raacno. Tani badanaa waa habka ugu dhaqsaha badan uguna fudud marka ay timaado dadka ku nool deegaankeenna, gaar ahaan markay tahay arday ama deegaan tacliimeed.
Ha aaminin barnaamijyada ama adeegyada mucjisada ah
Inkasta oo Facebook uu cadeeyay inuu run yahay Cadaadiska xagga amniga, taas macnaheedu maaha in qof kastaa si fudud u heli karo xogta ku kaydsan barxadda. Internetka waxaan ka heli karnaa tiro badan oo codsiyo iyo adeegyo sheeganaya inay siinayaan gelitaanka astaamaha gaarka loo leeyahay ee 'Instagram'.
Ma jiraan wax xaqiiqda ka fog. Adeegyadan / barnaamijyadan waxa kaliya ee ay qabtaan ayaa ah inay keydiyaan xogta kootadeena oo ay bilaabaan ku dhaji spam on our account marka lagu daro u dirida si isdaba joog ah fariimo isku nooc ah asxaabtayada.
Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale isku dayaan inay gacanta ku dhigaan datos kaarka deynta iyo lambarka taleefanka si aad noogu soo dirto farriimaha lacag-bixinta. Qaar ka mid ah bogagga shabakadda ee bixiya adeeggan loo maleynayo helitaanka xisaabaadka gaarka loo leeyahay, waa kuwan soo socda:
Tani waa mid ka mid ah adeegyada na hubinaya helitaanka astaamaha 'Instagram' ee gaarka loo leeyahay. Laakiin, sidaan kor uga faallooday, wax run ah kama sii fogayn karaan.
Markaad geleyso magaca isticmaaleyaasha koontada, websaydhku wuxuu sameeyaa nooc ka mid ah habka marin u helka (si loo bixiyo muuqaalka shaqada) ugu dambayntiina waxay ina tusaysaa daaqad ay nagu casuuntay inaan helno alaabooyin bilaash ah, soo dejiso ciyaaro bilaash ah ...
Boggan wuxuu raacaa isla nidaamka Instalocker, isla natiijadaas. Markaan gujino si aan u xaqiijino inaan nahay qof, taasi waxay ina tusaysaa taas hawshu way fashilantay iyo inaan dooran karno mid ka mid ah hadiyadaha tusay
Ujeedada kaliya ayaa ah in la qabto faahfaahinta kaarka deyntamaadaama ay tahay inaan bixinno lacagta rarka. Xitaa ha ka fikirin soo bandhigiddooda, maadaama ay tahay mid ka mid ah khiyaanooyinka ugu badan ee aan ka heli karno internetka.
Sawir qaade qaas ah
Sawirka Gaarka ah ee Gaarka ah wuxuu na siiyaa isla shaqeynta, null, si aan u galno sawirrada astaamaha gaarka loo leeyahay ee 'Instagram', halka dhiirrigelinta kaliya ay tahay in laga helo xogta kaarkayaga si loo bixiyo kharashka dhoofinta alaabta si mucjiso ah ayay inoo taabatay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo arko astaan ​​gaar ah barta Instagram